MagSafe-ka Apple ee Baabuurta Korontada | Waxaan ka socdaa mac
Shirkada Cupertino ayaa kaliya shatiyeysay nidaam aad ula mid ah MagSafe oo aan hadda ku kulannay iPhone 12-ka cusub ee habka lacag-bixinta ee baabuurta iyo baabuurta korontada ku shaqeeya. Markan waxaan dhamaanteen xasuus ku leenahay warar xan ah oo mar ka hadlay Apple car smart, Apple Car iyo qoraalo kale oo ku saabsan ... Hada waxa noo imanaya waa fadeexo kale laakiin markan waa mid dhab ka ah aduunka gawaarida.
Shahaadadu waxay muujineysaa nidaam lacag bixin oo la mid ah MagSafe
Waana xafiiska Patent-ka iyo Astaan-ganacsi ee Mareykanka dhawaan diiwaan geliyay codsi ah Apple ee la xiriirta qaabkan loo raro gawaarida. Tan waxaa loo yaqaan: Saldhigga lacag-bixinta oo leh qaab iswaafajin toos ah. Tani waa wax aan ka badnayn baakid lacag bixinaysa oo leh magnets leh nooc faseex ah oo u oggolaan doona xeedho inuu si sax ah ugu xirnaado oo aan baabuurka waxyeello u soo gaadhin si uun marka la isku dayayo inuu ku xidhnaado.
Marka dib u buuxinta gaariga ama gaariga korontada nidaamkan aad ayey ufududnaan laheyd madaama aan kaliya dhigeyno gaariga meel u dhow dekedda lacag bixinta waxayna ku xirnaan doontaa saldhigeena lacag bixinta magnet si fudud oo gebi ahaanba ammaan ah. Gaariga oo la dhigo meel u dhow saldhiga lacag-bixinta waa wax aan wada qaban karno laakiin moodooyinka gawaarida ee kala duwan waxay ku daraan talooyinka hadda laga helo meelo kala duwan ama dherer, sidaa darteed shatigan ayaa xallin lahaa dhibaatada. Waxay furi laheyd daboolka lacag bixinta si otomaatig ah waxayna bilaabi laheyd lacag.
U kac dhig meel u dhow xiraha oo u oggolow inuu si toos ah ugu dallaco nooca noocan ah ee MagSafe. Si fudud oo fudud, haa, waxaan la kulannaa patent aan macnaheedu ahayn in Apple uu bilaabi doono suuqgeyntiisa berri.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple's MagSafe oo loogu talagalay gawaarida korontada ku shaqeeya
Laga saaray barnaamijka Apple TV Remote si loo xakameeyo Apple TV